BLOG 25: HEALTHY NOODLES – JOAMAR-JOHN
Since I don’t eat rice anymore I have replaced it with noodles. So here isarecipe I’m sharing to you. I don’t know how to call it but I just discovered preparing it.
ကျနော် ဆန်စားတာ ရပ်လိုက်ကတည်းက ခေါက်ဆွဲပဲ အဓိက စားဖြစ်တော့တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အရသာရှိတဲ့ ခေါက်ဆွဲအတွက် အရသာ လိုအပ်ချက်တွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နာမည် ဘယ်လိုပေးရမလဲတော့ မသိဘူး။ ကျနော်လည်း စမ်းလုပ်ကြည့်ရင်း ရှာတွေ့ထားတာလေးပါ။
I know sometimes you get so fed up with eathing healthy but this noodle may be an exemption for you. Anyhow below is step by step photo process.
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ဖို့ အစားအသောက်တွေ လိုက်ဆင်ခြင်နေရတာ ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေ တစ်ခါတလေ စိတ်ပျက်နေကြမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီခေါက်ဆွဲလေးကိုတော့ အရသာ တွေ့သွားမှာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဆောင်ပုံလေးတွေကို ဓါတ်ပုံနဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော်။
Myanmar Translation by @Mg Bathar
Posted in: Uncategorized | Tagged: food, health, healthy, joamarjohn, lifehacks, livinghealthy, noodles, others, yummy
BLOG 33: STYLING FOR MMDC